Mozika hampihena lanja: Ny tombony azo amin'ny fampiofanana amin'ny lisitry ny lisitry ny playlist | Sakafo Nutri
Manampy anao hihena ve ny mozika? Hatramin'ny nanehoana an'io mozika dia afaka mampitombo fampisehoana mandritra ny fiofanana amin'ny fomba maro, azonao atao ny milaza hoe: ny mozika dia mandray anjara amin'ny fihenan'ny lanja.
Ary tsy misy isalasalana fa ny playlist tsara dia maneho hery manentana lehibe ho an'ny saina sy ny vatana. Ary ny fahatsapana ny antony manosika ary amin'ny ankapobeny ny fahafinaretana mandritra ny fiofanana dia lakilen'ny fanatanterahana ny tanjon'ny fitaizanao, ao anatin'izany ny fihenan-danja.
1 Tombony fihainoana mozika
1.1 Mampandroso anao
1.2 Ahenao ny ezaka mafy
1.3 Hanafaingana ny fanarenana
Tombony fihainoana mozika
Manampy amin'ny fanaovana izay hahafinaritra kokoa ny fampiofanana ny mozika, ka izay no antony hevitra tsara ho an'ny olona tsy dia tia manao hetsika ara-batana be loatra izany. Ho fanampin'izany, ny hira dia afaka mampitombo ny fifantohana, ny fandrindrana ary ny antony manosika ary koa ny fihenan'ny fiezahana mafy.
Ny hira haingana dia manampy anao hampiofana bebe kokoa, raha ny hira miadana kosa afaka manampy anao hiverina haingana amin'ny fitepon'ny fony miala sasatra. Izany no antony misy ny manam-pahaizana manoro hevitra ny fisafidianana ireo hira mifototra amin'ny fitepon'ny fonao mandritra ny fiofanana. Amin'io lafiny io dia zava-dehibe ny manamarika fa misy serivisy mozika mivantana izay mamela anao hanivana ny hira amin'ny alàlan'ny PPM (gadona isa-minitra). Amin'ny teny anglisy BPM (kapoka isa-minitra). Toy izany koa, amin'ireo serivisy ireo dia azo atao ny mahita lisitra maro isan-karazany namboarina manokana ho an'ny fampiofanana, izay hampitombo ny hamafiny sy ny fahombiazany.
Marihina fa heverina fa izany ny tombony azo amin'ny mozika dia tsikaritra kokoa rehefa ampiarahina amin'ny karazana fanatanjahan-tena antonony. Etsy ankilany, tsy ho toy izany izy ireo rehefa miasa amin'ny ambaratonga faran'izay mafy ny atleta mandritra ny fiofanana ataon'izy ireo.
Ny anjara toeran'ny mozika dia manan-danja mandritra ny fiofanana toy ny teo alohany. Manana fahaizana mampiditra ny fanahy sy ny angovo ilaina hanombohana fiofanana. Ilaina indrindra io tombony io amin'ireny andro ireny rehefa sarotra ny mihetsika, na noho ny tsy fahampian'ny angovo na ny antony manosika. Na izy roa.
Ahenao ny ezaka mafy
Mba tsy hijanona ny fihenan-danja (ary ny vokany amin'ny ankapobeny) dia ilaina ny fandrosoana amin'ny fiofanana. Midika izany fa mihazakazaka haingana sy lava kokoa. Natao ho an'ny hazakazaka izany, fa toy izany koa ny fampihetseham-batana rehetra, toy ny fanodinana bisikileta amin'ny bisikileta na mandeha, ary ny fampihetseham-batana. Ary koa, Mino ny mpikaroka fa ny mozika dia manampy anao tsy hahatsikaritra be loatra ka mila ezaka bebe kokoa ianao handravana ireo sakana sy hihoarana ny marikao (farafaharatsiny mandra-pahatongany amin'ny ambaratonga anaerobika).
Raha ampitahaina amin'ny fanatanjahan-tena tsy misy mozika, ny hafainganam-pandeha dia mety ho avo kokoa sy maharitra rehefa milalao playlist. Ny tempo ambony dia heverina fa hanosika anao hiasa mafy sy haingana kokoa mandritra ny fiofanana raha manakana ny ampahany amin'ny havizanana. Raha ny volavola no resahina dia ilaina ny mitandrina amin'ny fiarovana. Tsy tokony ho ambany izy io, fa tsy avo loatra koa. Ny antony dia ny fahasalamana lehibe no zava-dehibe indrindra. Tsara homarihina fa mampitandrina ireo manam-pahaizana fa ny fihainoana mozika be loatra matetika dia mety hanjary tsy hihaino.
Raha fintinina, ny fihainoana mozika haingana dia paikady lehibe handoroana tavy bebe kokoa isaky ny fotoam-pivoriana, satria manampy amin'ny fampitomboana ny hamafin'ny fampihetseham-batana. Ohatra iray ny kilasy mihodina. Na izany aza, misy ny olona, ​​mba tsy hieritreritra be momba ny fahasarotana sy hampiato ny sainy amin'ireo fahatsapana tsy mahafinaritra rehetra izay mety hiteraka fiezahana mitohy, dia mila ireo hira resahina fotsiny izy ireo mba hanatsarana ny toe-pony. Na miadana na haingana izy ireo dia tsy miraharaha izany; ampy ny mampifandray azy ireo amin'ny zavatra ao anatiny. Amin'izao fomba izao, ny mozika tsara indrindra hampihenana lanja dia ilay mampiorina anao hatrany mandritra ny fiofanana.
Hanafaingana ny fanarenana
Hitanay ny anjara toeran'ny mozika talohan'izay sy nandritra ny fiofanana, fa inona no hitranga aorian'izany? Ny fihainoana hira miadana kokoa aorian'ny fiofanana dia hanampy amin'ny fihenan'ny tosidra sy ny tahan'ny fo, ary koa ny voka-dratsy ateraky ny fiezahana mafy amin'ny vatana.
Toa, ny mozika miadana dia hahatonga ny famerenana haingana sy mahomby kokoa noho ny mozika haingana ary na dia ny fahanginana aza. Noho io antony io, raha ny tanjonao dia ny hahitana ny toe-javatra mety indrindra amin'ny fampiofanana manaraka, ny fanampiana amin'ny lalao dia mety hanampy anao koa.
Ho fanampin'ny fanampiana hampangatsiatsiahana ny vatana aorian'ny fihazakazahana na hampiakarana ny lanjany, ny fihainoana mozika miaraka amin'ny gadona voalaza dia heverina ho hevitra tsara ho an'ny hafanana. Ny tanjona dia ny hampiakarana ny gadon'ireo hira satria mihombo ny hamafin'ny fiofanana, noho izany dia asaina manomboka amin'ny hira miadana hanafana sy manohy hira haingana kokoa rehefa mihabe ny fitempon'ny fo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Nutri Diet » Vatsim-pivelomana » Mozika hampihena lanja
Resipeo fotsy atody